Fursad shaqo oo ka bannaan golaha shacbiga – Radio Muqdisho
Fursad shaqo oo ka bannaan golaha shacbiga
Sargaalka warbaahinta iyo wartabintu wuxuu masuul kayahay maaraynta xidhiidhka gudaha iyo midka dibada ee baarlamaanka iyo Warbaahinta dawlada ama mida gaarka loo leeyahay, danwadaagta (partners) iyo deeq bisiyayaasha, iyo sidoo kale macluumaadka dadweynaha iyo danwadaagta qaranka. Arimahan waxaa kamida diyaarinta iyo hirgalinta xidhiidhka istiraatijiyadeed ee baarlamaanka si uu uga taageero dhaqan-galinta qorshaha istiraatijiyadeed. Sidoo kale waxaa kamida, in la nidaamiyo xidhiidhka warbaahineed ee baarlamaanka; soo saarida iyo daabacaada iyadoo lala kaashanayo xubnaha shaqaalaha kale, soosaarida macluumaad la soo bandhigo, ka soo muujinta bogga golaha macluumaadkaa, la shaqaynta warbaahinta guddaha iyo mida qaranka si looga faa’iidaysto baraha bulshada (social media) iyo in si joogta ah loo tabiyo wararka kulamada golaha, kulamada guddiyada iyo dhaqaysiga dadweynaha.
Sargaalka warbaahinta iyo wartabintu wuxuu u warbixiyaa xoghayaha guud ee baarlamaanka wuxuuna si dhaw ula shaqeeyaa shaqaalaha kale, gaar ahaan kuwa xafiiska gudoonka.
II. Waajibaadka iyo Masuuliyadaha
• Inuu ka taageero Baarlamaanka horunamariyo xidhiidhka dibada iyo midka guddaha ee xoghaynta baarlamaanka iyo xafiiska gudoonka si loo kobciyo aqoonta warbaahinta iyo xidhiidhka shaqada ee baarlamaanka.
• In uu ka caawiyo golaha maaraynta kulamada dhagaysiga dadweynaha iyo kulamada kale, uuna duubo muuqaalka qaadana sawiro, kana diyaariyo warbixin si looga soo muujiyo bogga shabakada golaha.
• inuu ka caawiyo baarlamaanka samaynta warbixin sannadeed, ka taageero xoghaynta baarlamaanka diyaarinta macluumada sida druid-sharci, maqaalo, fariimo iwm; uuna wargaliyo gudoonka baarlamaanka wararka degdega ah ee ku saabsan golaha.
• Isagoo kaashanaya xafiiska xoghayaha guud iyo agaasimaha xafiiska gudoonka inuu shaaciyo kulamada dadweynaha, kulamada doodaha ee baarlamaanka, uuna duubo warbixinta iyo fariinta la tabinayo.
• Inuu ka caawiyo golaha inuu jawaab haboon ka bixiyo su’aalaha la xidhiidha macluumaadka dadweynaha, diyaariyo nuqulka koowaad ee warsaxaafadeedka, durida sharci iyo waxyaabaha kale si uu u ogaysiiyo warbaahinta gudaha iyo mida gobalka arrimaha muhiimka ah ee baarlamaanka.
• Isagoo kaashanaya xoghaynta baarlamaanka inuu ka caawiyo diyaarinta hadaljeedin iyo qodobada uu ka hadlayo afhayaanka baarlamaanka fadaraalka (spokesperson) ee arimaha kulamada caaadiga ah iyo la macaamilida warbaahinta.
• Inuu ka caawiyo diyaarinta fariin iyo macluumaad khuseeya gobolada tusaale ahaan wacyi-galinta bulshada ee arimaha baarlamaanka, dhagaysiga dadweynaha/hanaanka latashiga dib u eegista dastuurka, uuna bogga shabakada baarlamaanka ku joogteeyo dhacdooyinka iyo macluumaadka .
• Inuu la shaqeeyo xoghayaha guud ee baarlamaanka si uu u sameeyo heer qiyaaseed (standard) khuseeya ujeedooy uuna diyaariyo hab lagu qiyaaso sida ay u shaqaynayaan agabka sida bogga shabakada golaha, barta bulshada (facebook), si ay uga caawiso in baarlamaanku horumariyo kalana saaro mudnaantooda.
III. Heerka Waxbarasho
Waa inuu haystaa ugu yaraan shahaado dugsi sare iyo dibloome ama certificate ku saabsan Saxaafada, Wartabinta, iyo xidhiidhka dadweynaha;
IV. Khibrada Shaqo
• Waa inuu leeyahay ugu yaraan 5 sanno oo khibrad la xidhiidha saxaafada, warbaahinta, ama xidhiidka bulshada.
• Waa inuu u leeyahay xirfad sare qoraalka iyo xirfaad fikirka istiraatijiyadeed
• Waa inuu u leeyahay Xirfad wanaagsan barnaamijyada koombuyuutarka.
• Waa inuu awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo xaalad adag iyo wakhtiga loo cayimay inuu shaqo ku dhameeyo
• Waa Inuu leeyahay xirfad xidhiidhka bulshada iyo xalinta mashaakilaadka
• Waa Inuu yahay qof la shaqaynkara koox (team work)
• Inuu u heelanyahay ilaalinta cadaalada arimaha bulshada.
V. Xilliga shaqada
• Xilliga shaqada waa muddo lix (6) Bilood oo la kordhin karo
VI. Shuruudaha Luuqadeed
• Inuu si buuxda u qori karo uguna hadlikar af-Somaaliga
• Aqoonta Afafka kale waa caawinaysaa
Waxaa lagu soo haagjinayaa Cinwaannada
smado4@hotmail.com iyo abdikarimbuh@yahoo.com
22-6-15 Chief Technical Adviser
Fadlan riix halkaan si aad u akhrisato shaqada labaad ee ka bannaan xafiiska golaha shacbiga
22-6-15 Senior Resource Officer
Fadlan riix halkaan si aad u akhrisato shaqada saddexaad ee ka bannaan xafiiska golaha shacbiga